Fividianana lanja totalin'ny orinasa Machining CNC | PTJ Hardware, Inc.
Home > Momba anay > Fividianana lanja tanteraka
▶ Tombontsoa sy tolo-kevitra tsy manam-paharoa
Mba hahafaly ny mpanjifantsika sy hahazoana ny fitokisany amin'ny fanomezana
fandaharam-potoana mirindra sy valiny haingana noho ny filany miovaova mandrakariva.
Manome tahiry amin'ny alàlan'ny programa fitahirizana entana sy mpivarotra izahay.
Izahay dia mampihena ny fotoana sy ny ezaka ary misoroka ny tsy ampoizina amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny rosia amin'ny alàlan'ny fandefasana baiko.
Manatsotra ny traikefan'izy ireo mividy izahay amin'ny alàlan'ny fanomezana dingana maro ao an-trano sy fitantanana serivisy ivelany. Ity fomba fiantsenana tokana ity dia manafoana ny fotoana fitarihana ary manome fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa sarotra.
Mampiasa namboarina izahay satria io no rindrambaiko be mpampiasa sy azo atokisana indrindra natao manokana ho an'ny mpanamboatra manokana, fivarotana asa ary fivarotana teknolojia avo lenta.
Ny fampahalalana momba ny asa rehetra dia tafiditra ao amin'ny rafitray isaky ny manomboka ny baikon'ny mpanjifa tsirairay. Ny fizotrany rehetra dia arahana amin'ny alàlan'ny fandefasana mba hahazoana antoka fa feno ny datin'ny fanoloran-tena.
▶ Famokarana kalitao sy fiankinana
Ny orinasa PTJ dia tsy mitazona fanamarinana ISO 9001: 2015 fotsiny, fa miasa ihany koa mifanaraka amin'ny fenitry ny governemanta MIL-I-45208A sy Mil. Spec ho an'ny sary hosodoko sy welding welding.
Ireo fanamarinana sy fisoratana anarana ireo dia manamarina ny fandavan-tena apetratsika amin'ny kalitaon'ny vokatray.
Miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny famokarana maro, mampihatra ny fitsipika sy ny fanao amin'ny famokarana LEAN ihany koa izahay.
Midika izany fa miezaka manala ny fako isika, manatsara ny fahombiazany ary manolo-tena amin'ny programa fanatsarana tsy tapaka.
▶ Fanekena ny mpanjifa
Vokatr'ireto fitsipika ireto, ny orinasa PTJ dia neken'ny mpanjifa ho mpamatsy miavaka ny faritra masinina tsara.